Nguva yekushandisa • Yurie BSF
Mitemo yekushandisa (TOS) yeYuroeBSF
Gamuchirai kuMaggot YurieBSF digital site. TOS (zvinyorwa zvekushandisa) kana kupa rubatsiro chinhu chebasa rinofanira kuteverwa uye kubvumirana nemapoka maviri mumitemo inoshanda. Mitemo yedu haina hanya nezvinhu zvakadai sekuputsika kwemitemo yekuchengetedza vatengi, nemitoo inogona kusungirwa zviri pamutemo. Tinogonawo kushandisa Mitemo yeBasa nemitemo ine chokuita nekushandiswa kwemashumiro pawebsite.
Iwe wakasununguka kuwana uye kushandisa zvose zviri pano. Nguva yedu yehupenyu yakabatana neweYuroeBSF site ndeyokuti:
Iwe unogona kushandisa zvese zvehuwandu hune chokuita neunoda
ndapota shandisai uye kopota paste kana zvichidiwa
kana pane mamwe mimwe mibvunzo tapota taura nesu
Nyore uye Inobatsira Nzira dzekuita EM4 Pamwe Pamba Pamba